Muwaadin Soomaaliyeed oo Xalay lagu dilay dalka Koonfur Afrika | dayniiile.com
Home WARKII Muwaadin Soomaaliyeed oo Xalay lagu dilay dalka Koonfur Afrika
Kooxo Burcad Koonfur Afrikan ah ayaa waxaa ay meelo kamid ah gudaha dalkaas kudileen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa Dhalinyarada u Shaqa tegay dalkaas ee ku lahaa Goobaha Ganacsiga.
Alle ha u Naxariistee Muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Cali Maxamed Xasan (Balaakii) ayaa lagu toogtay degaanka Nyanga oo ka tirsan Magaalada Cape Town ee Dalkaasi Koonfur Afrika xilli uu ku dhexjiray Gaarigiisa, iyada oo Kooxdii ka dambeeysay dilkiisa ay Goobta ka baxsadeen.
Mid kamid ah Soomaalida ku nool degaanka uu dilka ka dhacay ee Nyanga ayaa sheegay in Muwaadinka Soomaaliyeed uu Gaari ku wareejin jiray Rooti, hayeeshee Kooxaha Burcadda markii ay dileen aysan waxba ka qaadan, isla markaana ay isaga tageen.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa dalka Koonfur Afrika waxaa ku batay dilalka loo geysanayo Soomaalida, waxaana ay aheyd Sabtidii la soo dhaafay markii laba dhalinyaro Soomaali ah la dilay laba kalena la dhaawacay.
Previous articleCiidamada Amniga oo Muqdisho ku qabtay Burcad dhac geysan jirtay
Next articleMareykanka: Meydka Wiil Dhalinyaro Soomaali ah oo Webi dhexdiisa laga helay
Dowladda Imaaraatka oo lacag ugu deeqday Soomaaliya
Maamulka Somaliland oo dhalinyaro farabadan ku xir xirtay Magalada laas-caanood